May 19, 2017 | Published by: deeq
Waxa kaloo wararka arrintaas kusaabsan intaas kusii darayaan inuu guul-darro kusoo gebageboobey shir kusaabsan xal u helidda arrintaas oo muddo dhawr saacadood ah Wasiirkan waxbarashada oo ay weheliyaan mas’uuliyiinta maammulka iyo Waxgarad kasoo jeeda degaannada Sanaag-bari uga soconayey Guriga Martida ee Magaalada Ceerigaabo. Taasi awgeedna wax iska beddeleen qorshihii socdaalka wasiirka ee kuwaajahnaa degaannada Hadaaftimo iyo Badhan ee Sanaag-bari islamarkaasna lafilayo subaxnimada berrito (Sabtida) in wasiirka iyo weftigiisu kormeer ugu bixi doonaan degaanno kale. Waxana ilaa hadda aan caddayn halka uu ku danbayn doono baabuurka cusub ee Waxbaashada Badhan wasiirku u wadey iyo weliba agabkii kale ee waxbaashada uu ugu soo talagalay.
Dhinaca kalena is-hortaaggan lagu diiddan yahay Wasiirka Waxbarashada Somaliland iyo weftigiisa ayaa wararka qaarkood sheegayaan inay ka danbeeyaan xubno degaannada Sanaag-bari kasoo jeeda kuwaasoo isugu jira Madax-dhaqameed xidhiidh dhow la wadaaga Maammul-goboleedka Puntland iyo weliba Siyaasiyiin Muqdisho kusugan oo gor-gortan kusaabsan maammul-goboleed u gaar ah inay ka helaan kula jira Madaxweyne Farmaajo iyo Dawladdiisa. Halka wararka qaarkoodna sheegayaan inay jirto arrimo la xidhiidha qorshaha horumarineed iyo maaliyadeed ee Jaamacadda Magaalada Badhan oo kaalintii laga filayey lagu saluugsan yahay wasiirkan waxbarashada.